သတ္တိအရှိဆုံး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများသာ သွားရောက်လည်ပတ်ဝံ့မည့်နေရာ (၁၇) နေရာ - ONE DAILY MEDIA
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာ ရဲရင့်သော ခရီးသွားများမဟုတ်ကြောင်း ဝန်ခံရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့5ထပ်ကနေ အောက်ကိုငုံ့ကြည့်ရင်း မူးဝေလာတတ်သလို ၊ ကြွက်တွေအကြောင်း တွေးမိတောင်ကြောက်တတ်ကြသူ‌ တွေရှိပါတယ် ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့မှာ ကြောက်ရွံ့မှုကို ပျော်ရွှင်စရာအဖြစ် ခံစားရသည့်အမြင်တစ်ခုရှိလည်း နေပါတယ်။ ဒါကို မယုံပါက ကြောက်လန့်စေသော အရာများကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီး အံ့အားသင့်ဖွယ် အမှတ်တရများ ရရှိထားသည့် ခရီးသွားများအကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
သင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့် အမှန်တကယ်နေရာ ၁၇ ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ပုံများဖြစ်သော်လည်း ဤမြင်ကွင်းများကို လူကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီး ခံစားခဲ့ရခြင်းလောက်တော့ ကောင်းမယ်မထင်ပါဘူး။
17. ကမ္ဘာ၏အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းကို ပြသနိုင်ပါတယ်
A post shared by Kayla Bloomquist (@always_be_blooming)
ဤနေရာကို Jacob’s Well အဖြစ်လူသိများပြီး United States, Texas တွင် တည်ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏အနက်ရှိုင်းဆုံး စူးစမ်းလေ့လာသည့်နေရာသည် ပေ ၁၄၀ ခန့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါရေတွင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အန္တရာယ်အရှိဆုံး ရေငုပ်နေရာများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် နာမည်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာကို သင်သွားရောက်လည်ပတ်လိုပါက နက်နဲသော မှောင်မိုက်ဂူများကို ဝေးဝေးနေခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။
16 .၎င်းတို့ကို ရှာဖွေစူးစမ်းပါက ကမ္ဘာသစ်များပင် ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်
ဤကဲ့သို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိ Mirror Lake ဟာ သာလွန်ထူးခြားလှပါတယ်။ ၎င်းတွင် ရေအလွှာများ ရောနှောခြင်းမရှိပါဘူး။ အောက်ခြေအလွှာက ပူနွေးကာ ၊ အစိမ်းရောင်နှင့် ဆားငန်ဖြစ်နေချိန်တွင် အပေါ်ဆုံးအလွှာက ကြည်လင်ပြီး အေးမြနေပါတယ်။
15. “အိပ်မက်ထဲမှာ ဒီနေရာကို ငါမြင်ဖူးတယ်။”
မက္ကဆီကိုရှိ Cenote Ik-Kil သည် ခမ်းနားလှပြီး ၎င်း၏သမိုင်းသည်လည်း အမှန်တကယ်ပင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ မာယာလူမျိုးများက ၎င်းအား အထွတ်အမြတ်ထားရာ နေရာတစ်ခုဟု ယူဆကြပြီး ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်များနှင့် အင်္ဂါဗေဒ ပညာရှင်များက ၎င်း၏ ရေနက်ပိုင်းအတွင်း အရိုးများနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
14. ဒီအတွေ့အကြုံဟာ လူတိုင်း၏စာရင်းတွင် ပါဝင်သင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါတယ်
တစ်ခါတရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မိမိကိုယ်ကိုမည်မျှသေးငယ်သည်ကို သင်မေ့သွားပါက၊ အင်ဒိုနီးရှား Derawan ကျွန်းရှိ ဝေလငါးမန်းများနှင့် ရေကူးကြည့်ပါ။ ဤသတ္တဝါများ၏ အရွယ်အစားဟာ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ဝေလငါးမန်းများဟာ Plankton ပေါ်တွင် ကျက်စားပြီး လူများကို လုံးဝစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပါဘူး။
13. “ရေအောက် လှိုဏ်ဂူအတွင်း ရှိနေပြီး လေတစ်ချက်ရှူရှိုက်ခြင်းက ကျွန်တော့်ကို ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်အတူ ရွှင်လန်းကြည်နူးစေပါတယ်”
သင့် Instagram တွင် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဓာတ်ပုံများ မရှိသေးပါက သင့်အား Hawaii သို့ သွားရောက်ရန် အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ “ကြီးမား‌သော လှိုင်းလုံးများက သင့်အား လိုဏ်ဂူအတွင်း၌ ပတ်ပတ်လည် တွန်းလှန်နေချိန်” ကို သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
12. ဘေးကင်းသော ဆိပ်ကမ်းမှ ဝေးရာသို့ ရွက်လွှင့်သွားကြောင်း သိရ သည်။
ဤဂူသည် ခရိုအေးရှား၊ Pula အနီးတွင် တည်ရှိပါတယ် ။ အချို့က ၎င်းကို “ခိုဂူ” ဟုခေါ်ပါတယ် ။ ၎င်းသည် အွန်လိုင်းတွင် ရေပန်းစားလာခဲ့ပြီး တစ်စုံတစ်ဦးက ရှာဖွေပုံနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များကို ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ အထဲသို့ဝင်လိုပါက ဓာတ်မီးယူရန် မမေ့ပါနှင့်။ လူများက အလွန်အသုံးဝင်သည်ဟု ဆိုကြပါတယ်။
11. နေထွက်တာကို ဤနေရာတွင် မြင်ချင်ပါတယ်
Yosemite အမျိုးသားဥယျာဉ် Glacier Point အနီးရှိ Overhanging Rock တွင် ကောင်းကင်ကို ထိနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ချိုင့်ဝှမ်းဟာ ပေ 3,200 အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ” ငါရောက်ခဲ့ဖူးပြီ” ဟု ကြွားနိုင်လောက်သည်အထိ ဓာတ်ပုံများရိုက်ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။
10. “ထောင်ပေါင်းများစွာသော ငါးသေတ္တာငါးများ သင့်ပတ်လည်တွင် ကူးခတ်နေသည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ.. ၎င်းကို သင်နှစ်သက်မည်လား ?? ”
A post shared by KATE & OLLY | TRAVEL COUPLE (@kotravellers)
” ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ရှိ ထူထပ်သောတိမ်တိုက်က နေရောင်ခြည်ကိုဖမ်းစားထားပြီး သေးငယ်ပြီး ထူထပ်စွာ ကူးခတ်နေသော ငါးများကို ဖော်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီတွင် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သေးငယ်သော ငါးတစ်သန်းကျော်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပါလိမ့်မယ် ” သင်သည် အခြားသူများ၏ အတွေ့အကြုံများကို မဖတ်ချင်ဘဲ Sardine Run ကို သင့်မျက်လုံးဖြင့် မြင်လိုပါက Moalboal သို့သွားရန် စဉ်းစားလိုက်ပါတော့။
A post shared by Shalee | Adventure Travel (@shaleewanders)
ဤအရာသည် သင့်အားအံ့အားသင့်စေမည့် နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် Sedona , Arizona တွင် တည်ရှိပါတယ်။ ကျောက်ဖွဲ့စည်းပုံများစွာ ရှိပြီး နာမည်ကျော် Cathedral Rock နှင့် Bell Rock တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
A post shared by Antoine Janssens (@antoinejans)
ဤရိုက်ချက်အား ထပ်ခါတလဲလဲ ရိုက်လိုသူများ ရှိကြောင်း သေချာပါတယ်။ ဒါဟာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Lac Lioson တွင် ရှိပါတယ်။ သင့်လက်မှတ်ကို ဝယ်ယူနေပြီဆိုလျှင်၊ ဤကဲ့သို့သော အပေါက်တစ်ခုဖန်တီးရန် ကိရိယာများကို ထုပ်ပိုးရန် မမေ့ပါနှင့်။
7. အမှောင်ထဲသို့ ကွေ့ကောက်သောလမ်း..
အမှောင်နှင့် အလုံပိတ်နေရာများကို မကြောက်ပါက ဒါက အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါတယ် ။ New Mexico ရှိ Carlsbad Caverns ဟာ လူအများကို ၎င်း၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုနှင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတို့ဖြင့် ဖမ်းစားထားပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှ ရှေးအကျဆုံးနှင့် အကျော်ကြားဆုံး လှိုဏ်ဂူစနစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းငယ်များစွာက အမျိုးမျိုးသော အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် အပြောအဆိုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေပါတယ်။
6. ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ ဝိညာဉ်ကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါမယ်
ဤနေရာသည် နှင်းဘုရင်မ နေထိုင်သည့် နေရာဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဤကြီးမားသော ရေခဲအက်ကြောင်းများနှင့် လှိုင်းများကို Iceland၊ Skaftafell တွင် တွေ့မြင်နိုင်တာကြောင့် အောက်ငုံ့ကြည့်ရမှာ ကြောက်နေမှာလား ??
5. တစ်ခဏတာလောက် တစ်ယောက်တည်းနေလိုသောအခါ…
A post shared by ✨ Christy Woodrow ✨ (@ordinarytraveler)
အထီးကျန်နေသလို ခံစားဖူးလား။ သင့်အား အေးချမ်းမှုဖြင့် အံ့အားသင့်ရစေမည့် နေရာတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကနေဒါနိုင်ငံ အယ်လ်ဘာတာမြို့အနီးတွင် စစ်မှန်သော တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကို သင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အပြာရောင်ရေ ၊ စိမ်းလန်းသောသစ်ပင်များနှင့် လေပြေအေးတို့က သင့်အား လတ်ဆတ်သော သဘာဝကို ဖော်ကျူးပေးပါလိမ့်မယ်။
4. “သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီး မီးတောင်ဝတစ်လျှောက် လမ်းလျှောက်တာက ဆန်းကြယ်ဆုံး အခိုက်အတန့်တွေထဲက တစ်ခု…”
A post shared by Hi I’m Jenny (@awaywithjenny)
ကမ္ဘာမြေဟာ အလွန်အသက်ဝင်နေပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ယင်းကို အတည်ပြုချက်ရှာရန် အခွင့်ကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ မီးတောင်ရှင်တစ်ခုကို ငုံ့ကြည့်ရန် သတ္တိရှိပါသလား? Bromo တောင်သည် အမြင့် 7,641 ပေရှိပြီး ထူးဆန်းသော ခရီးသွားများကို ခေါင်းမှ ခြေဖျားအထိ ပြာများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။
3. ကမ္ဘာကြီးက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြည့်နေသလို ခံစားရပါတယ်
ကမ္ဘာကြီး၏မျက်လုံးကို ဘဲလစ်ဇ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းကို Great Blue Hole ဟုခေါ်ပြီး ၎င်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ရဲရင့်သော ခရီးသွားများအတွက် “ must dive” နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါက်သည် စက်ဝိုင်းပုံဖြစ်ပြီး အလျား 984 ပေကျော်နှင့် အနက် 410 ပေရှိပါတယ်။
2. “ရွက်လွှင့်နေရင်း ကုန်သည်‌လေကို ရှူရှိုက်ပါ”
A post shared by 💖Bella💖 (@_bella.story_)
ငယ်စဉ်က ဒန်းလွှဲခြင်းကို မကြိုက်ဖူးသူ ရှိပါသလား ? အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာ ပိုမိုကြီးထွားလာကြပြီး ဒါကို ဝမ်းနည်းနေစရာမလိုပါဘူး။ Pichincha မီးတောင်တွင် လှပသော မြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်အတူ ဒန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီတောင်တက်ရမှာ ကြောက်နေမှာလား ?
1. ဒဏ္ဍာရီလာဧရာမသတ္တဝါများနဲ့ကစားလိုပါသလား ?
A post shared by Ruby (@rubixcube_)
အတွေ့အကြုံဆန်းများကို လူများက ရှာဖွေနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှ မထင်ထားသော်လည်း လူအများ၏ ရူးသွပ်မှုများဟာ မကန့်သတ်နိုင်ပါဘူး။ သင်သည် သင့်ထက် ၃ ဆခန့်ကြီးမားနိုင်သည့် ရေငန်မိကျောင်းနှင့် ရေအောက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျှဝေရန် စိတ်အားထက်သန်ပါက သင်သည် သြစတေးလျရှိ Crocosaurus Cove သို့ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်အာရုံကြောများကို စမ်းသပ်ရန် သို့မဟုတ် adrenaline ထုတ်လွှတ်သည့် လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဝေးဝေး နေရန်နှစ်သက်ပါသလား ? သင်လည်ပတ်ဖူးသမျှ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနေရာမှာ ဘယ်နေရာများလဲ ? မှတ်ချက်များတွင် သင်နှစ်သက်သော စိတ်လှုပ်ရှားစရာနေရာများကို စာရင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပေးပါ။